Nhau - Ungasarudza sei reza kuti ibudirire
1. Tarisa kuwelda kweye saw blade. Icho chikamu chakabatana neiyo chiwanikwa uye iro reza muviri haifanire kuve yakanyanya kuita yero kunge mhangura .Hakuna ekunyepera kutengesa. Iyo solder inofanira kunge yakati chena, iine mutsetse mutete, yakachena kwazvo. Hapana ngura yemhangura yakasvibirira.
Izvo zvine chekuita nekuchengetedza, iwe haudi esimbi mashizha anobhururuka uchibva paunenge uchicheka huni. Iyo ine simba kunge pfuti diki-inobereka.
Ungasarudza sei banga kuti ribudirire?
Tarisa pane rakarodzwa jira reza, pane mativi mana akarodzwa, mativi maviri, pamberi zino pamusoro, pamusoro pekunze.Kukuya kwakatsetseka, hakuna concave uye convex, kusachinjika kwakanaka, chipande chipiko .Iyo nzvimbo inopenya. Hapana kubvaruka kana kusapfeka. Uye ichanamatira sawdust pane saha ine kumberi kumberi uye kumashure kumashure.
3. Tichitarisa kumeso kwemuviri wefirimu, zvinoitika pakumonyoroka zvinofanirwa kuzivikanwa kune wese munhu. Iyo inotsvedza iyo kukakavara coefficient yakaderera, hazvisi nyore kunamatira matanda machipisi uye huni kunama. Chitarisiko chakanaka.Inogona kuyerwa kusvika tarisa ndege, haigone kunge isina kuenzana sembiya.
4. Kana mamiriro ezvinhu achibvumidza, iwe unogona kuisa saha pamushini uye uwane bvunzo. Kana pasina ruzha kana kusvetuka kana uchiita usimbe. (Chenjera panguva ino) Zvishoma nezvishoma tendeuka neruoko, kuyera radial runout.
Kana dziri nzira dzehunyanzvi dzekuongorora, ivo vanongovimba nemidziyo uye maturu ekuyera kuti vawedzere kuongorora kwakadzika. Iwo ekunze akaona mashizha ese ari 15.88mm uye 25.4mm maburi epakati, uye yekumba shaft shaft inoita kunge 20 kana 18. Kana iwe uchida yakanaka yekucheka maitiro, 7 inches anogona kutenga makumi mana kana makumi matanhatu mazino, kucheka ne7 inches 16 kana 24 gumi meno makumi maviri nemasere emazino, mazino makumi mana anogona kushandiswa kucheka, kunyatsoona saha kunogona kushandiswa, mazino makumi masere kana mazino zana.
Nhare yakanaka yekucheka inogona kutema zvirinani pane yakarongedzwa pamusoro, isina mabhureti kumucheto, kunyanya kana huni ichichekwa zvakanyanya. Izvo zvakanaka!
Wooden Chishandiso Cabinet, Cnc router mabhatani, Cnc Mashini Maturu, Robin Wood Zvishandiso, Woodworking Turu Kanzuru Zvirongwa, Cnc Bits,